Kuzivisa mitongo yaMwari (1-8)
Mwari anozivisa zvakavanzika zvake (7)
Kutongwa kweSamariya (9-15)
3 “Inzwai shoko iri rataurwa naJehovha pamusoro penyu, imi vanhu veIsraeri, imi mhuri yese yandakabudisa munyika yeIjipiti: 2 ‘Ndimi chete vandakaziva pamhuri dzese dzepanyika.+ Ndokusaka ndichakutongerai kukanganisa kwenyu kwese.+ 3 Vanhu vaviri vangafamba vese vasina kumborangana here? 4 Shumba ingadzvova musango isina chayabata here? Shumba yava nezenze* ingahon’a munzvimbo yainogara, iyo isina chayabata here? 5 Shiri ingabatwa nechiteyeso pasina aiteya here?* Chiteyeso chingaurukira mudenga ipo pasina chachabata here? 6 Kana hwamanda ikaridzwa muguta, vanhu havadederi here? Kana muguta mukava nedambudziko, Jehovha haasi iye anenge ariunza here? 7 Nekuti Changamire Ishe Jehovha haaiti chinhuAsina kuzivisa zvakavanzika zvake kuvashumiri vake, ivo vaprofita.+ 8 Shumba yadzvova!+ Ndiani asingazotyi? Changamire Ishe Jehovha ataura! Ndiani asingazoprofiti?’+ 9 ‘Zvizivisei muri pashongwe dzakavakwa zvakasimba dzekuAshdhodhiUye pashongwe dzakavakwa zvakasimba dziri munyika yeIjipiti. Taurai kuti: “Unganai mumakomo eSamariya;+Onai zhowezhowe riri kuitwa mairiNekubiridzira kuri kuitwa mairi.+ 10 Nekuti havazivi kuti kuita zvakarurama kuita sei,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha,“Ivo vaya vari kuita kuti mhirizhonga nekuparadza zvitutirane mushongwe dzavo dzakavakwa zvakasimba.”’ 11 Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha,‘Nyika ichakombwa nemuvengi;+Achakusiya usisina kana simba,Uye zvinhu zviri mushongwe dzako dzakavakwa zvakasimba zvichapambwa.’+ 12 Zvanzi naJehovha,‘Sezvinoita mufudzi anongokwanisa kubvuta makumbo maviri chete kana chidimbu chenzeve mukanwa meshumba,Saizvozvowo pavaIsraeri vagere muSamariya pamibhedha yakanaka nepazvigaro zvakanaka,*Pachangopona vashoma.’+ 13 ‘Inzwai, muyambire imba yaJakobho,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, Mwari wemauto. 14 ‘Nekuti pazuva randicharanga Israeri nemhaka yekupanduka kwese kwaakaita,+Ndichaparadzawo atari dzekuBheteri;+Nyanga dzeatari dzichadimburwa dzowira pasi.+ 15 Ndichaputsa imba yemunguva yechando pamwe chete neimba yemunguva yezhizha.’ ‘Dzimba dzakagadzirwa nenyanga dzenzou dzichaparara+Uye dzimba dzemaoresa* dzichaparara,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.”
^ Kana kuti “Shumba ine simba.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “icho chisina zvinoikwezva here?”
^ Kana kuti “nepazvigaro zvekuDhamasiko.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Uye dzimba zhinji.”